संयुक्त राज्य अमेरिका मा एक आइट्यून्स खाता बनाउनुहोस् आईफोन समाचार
एक अमेरिकी आईट्यून्स खाता बनाउनुहोस्
आईप्याड समाचार | | एप्स स्टोर, ट्यूटोरियल र म्यानुअल
त्यहाँ सोध्ने धेरै छन् युएसए (संयुक्त राज्य) बाट कसरी आईट्यून्स खाता बनाउने। संग भर्खरको मूल्य वृद्धि त्यसले संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपमा अनुप्रयोगहरूको मूल्य बराबर गरेको छ, जब वास्तविकता यो छ कि डलर-यूरो विनिमय अझै पनि यूरोको लागि अनुकूल छ, अमेरिकी स्टोरमा सिधा खरीद गर्नका लागि एउटा खाता बनाउन र राम्रो बचत गर्न रोचक हुन सक्छ। वर्ष पछि पैसा। थप रूपमा, त्यहाँ त्यस्तो अनुप्रयोगहरू छन् जुन केवल अमेरिकी स्टोरमा अवस्थित छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकामा खाता सिर्जना गर्न धेरै सजिलो छ, र हामी तलका चरणहरू व्याख्या गर्दछौं, यद्यपि अमेरिकी विवरण प्रयोग गर्दा केहि विवरणहरू पनि ध्यानमा राख्नुपर्दछ।
1 महत्त्वपूर्ण पक्षहरू विचार गर्न
महत्त्वपूर्ण पक्षहरू विचार गर्न
तपाईंको उपकरणमा दुई खाताहरू सँगै रहन सक्छन्, ताकि तपाईं आफूले किनेको गुमाउनु हुने छैन। तपाईंले केवल एउटा खाता कन्फिगर गर्नुपर्नेछ, यसको अनुप्रयोगहरू डाउनलोड गर्नुहोस्, अन्य खातामा स्विच गर्नुहोस्, र यसको अनुप्रयोगहरू डाउनलोड गर्नुहोस्।
जब तपाईले अपडेट गर्नु पर्ने हुन्छ, तपाईंले सम्बन्धित खातामा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ अनुप्रयोग अद्यावधिक भइरहेको छ।
तपाईंले आफ्नो कम्प्युटरमा आईट्यून्समा दुई खाताहरू आधिकारिक गर्नुपर्नेछ। तपाईं दुई खाताहरूको अनुप्रयोगहरू स्थानान्तरण गर्न सक्नुहुनेछ, र तिनीहरूलाई तपाईंको उपकरणहरूमा स्थानान्तरण गर्न। अद्यावधिक गर्ने बेला, उपकरणमा उस्तै हुन्छ, तपाईले खाताको पासवर्ड प्रविष्टि गर्नु पर्छ जुन अद्यावधिक हुँदैछ।
केहि अमेरिकी अनुप्रयोगहरू संयुक्त राज्यमा मात्र काम गर्दछन्। उदाहरण को लागी नेटफ्लिक्स स्पेन मा काम गर्दैन यदि तपाईं अमेरिकी स्टोर बाट डाउनलोड गर्नुहोस्।
हामीले गर्नु पर्ने पहिलो कुरा भनेको हाम्रो कम्प्युटरमा आईट्यून्स चलाउनु, हाम्रो सामान्य खाताबाट विच्छेदन गर्नु, र देशलाई संयुक्त राज्यमा परिवर्तन गर्नु हो। यसको लागि तलको दायाँ भागमा हामी हाम्रो देशको झण्डामा क्लिक गर्दछौं।
नयाँ पर्दा अधिक झण्डा संग देखा पर्नेछ, र हामी संयुक्त राज्य अमेरिका देखि एक छान्छौं। यसले हामीलाई अमेरिकी स्टोरमा पुनःनिर्देशित गर्दछ। एकपटक भित्र, हामीले एक नि: शुल्क अनुप्रयोग छनौट गर्नुपर्दछ, तपाईले चाहानुहुन्छ, र यसलाई डाउनलोड गर्न क्लिक गर्नुहोस्।
त्यसो भए यो विन्डो खाली खाता स्थानको साथ देखा पर्नेछ। विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस् Apple एप्पल आईडी सिर्जना गर्नुहोस् »।
त्यसपछि हामी एउटा महत्त्वपूर्ण बुँदामा आउँछौं: ईमेल खाता। समस्याहरू जोगिन, यो नयाँको प्रयोग गर्नु उत्तम हो जुन तपाईले यसका लागि विशेष रूपमा सिर्जना गर्नुभयो। तपाईको आईफोन वा आईप्याडमा आईमेसेज, फेसटाइम, वा आईट्यून्स वा अनुप्रयोग स्टोर सम्बन्धी कुनै पनि कुराका लागि प्रविष्ट गर्नुभएको कुनै खाता मान्य छैन। त्यसैले म दोहोर्याउँदछ, GMail र voila मा नयाँ सिर्जना गर्नुहोस्। रिकभरी खाता तपाईले चाहानुहुन्छ जेसुकै होस्, यो अर्को एप्पल आईडी भए पनि।
र हामी अर्को महत्वपूर्ण बुँदामा आउँछौं: भुक्तान र ठेगाना फारम। तपाईं मात्र "कुनै पनि होइन" रोज्न सक्नुहुन्छ। यो विकल्प देखा पर्नको लागि यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले प्रक्रियाको सुरूमा नि: शुल्क अनुप्रयोग डाउनलोड गर्न प्रयास गर्नुभयो। तपाइँ कुनै पनि गैर-अमेरिकी बैंक कार्डको लायक हुन सक्नुहुन्न, यदि तपाई संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट हुनुभएको छैन भने PayPal लाई पनि लायक लाग्दैन।
र अर्को चरण दिशा हो। तपाईंले वैध राख्नुपर्दछ, तर यो एकदम सरल छ। In गुगल नक्सा संयुक्त राज्य मा कुनै पनि शहर को लागी हेर्नुहोस्, कुनै व्यवसाय छान्नुहोस् र तपाईसंग फोन समावेश भएको मान्य ठेगाना हुनेछ।
तपाईंसँग पहिले नै अमेरिकी खातामा अनुप्रयोगहरू खरीद गर्नको लागि तयार छ। तपाईं केवल नि: शुल्क अनुप्रयोगहरू किन्न सक्नुहुन्छ, तर यदि तपाईं पाउनुहुन्छ इन्टरनेटमा केहि अमेरिकी आइट्यून्स कार्ड (सावधान रहनुहोस्, केवल अमेरिकी महिलाहरू) तपाईं खाताबाट पैसा रिचार्ज गर्न सक्नुहुनेछ र खरीदहरू गर्न सक्नुहुनेछ। मजा लिनुहोस्।
थप जानकारी - ०.0,99eयुरोको अनुप्रयोग स्टोरको लागि नयाँ मूल्य देखा पर्दछ
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » एप्पल उत्पादनहरू » एप्स स्टोर » एक अमेरिकी आईट्यून्स खाता बनाउनुहोस्
तपाईले आफ्नो हालको खाताको स्थान अमेरिकामा परिवर्तन गर्न सक्दछौं र यो हो। यो गर्नका लागि, आईडभिसबाट (त्यसैले म गर्छु) तपाईं सेटिंग्स, आईट्यून्स र अनुप्रयोग स्टोर, एप्पल आईडी, आईडी हेर्नुहोस्। तपाईं चाहानु भएको देश चयन गर्नुहोस् र कुनै ठेगाना, जिप कोड र फोन नम्बर राख्नुहोस्। संयुक्त राज्य अमेरिकामा वालमार्टको डाटा खोज्नुहोस् र त्यस्तै भयो। यो महत्त्वपूर्ण छ कि उनीहरूसँग क्रेडिट वा डेबिट कार्ड छैन, वा हेर्नुहोस् कि यसले संयुक्त राज्य अमेरिकामा काम गर्छ। तिनीहरू नियम र सर्तहरू स्वीकार गर्छन् र त्यस्तै हो। एक परिवर्तन ईमेल को लागी तपाइँलाई सूचित गर्न को लागी एप्पल बाट आउछ मलाई लाग्दैन कि म केहि बिर्सन्छु।
बरु मसँग दुईजना छन् त्यसैले म प्रत्येकको उत्तम प्राप्त गर्न सक्दछु ...
ठीक छ, मसँग पहिले नै मेरो अमेरिकी खाता छ, तर के एप्सहरू छन् जुन केवल डाउनलोड गर्न सकिन्छ यहाँ स्पेनिश स्टोर मार्फत मात्र होईन?
नेटफ्लिक्स र पाण्डोरा मात्र म हेर्छु।
Rpro लाई जवाफ दिनुहोस्
त्यहाँ अझ धेरै छन्, उदाहरणका लागि ट्विटर संगीत र धेरै जसलाई यी स्थानहरूको लागि राम्रोसँग थाहा छैन।
ट्विटर संगीत उनको पछि फेला, सही।
तपाइँ केहि बढि हाइलाइट गर्न सक्नुहुन्छ, कि तपाईको विचारमा, रमाईलो छ र स्पेनिश स्टोरमा छैन? धेरै धेरै धन्यवाद!
उफ, मलाई समय दिनुहोस् र केहि तयार गर्नुहोस्।
मलाई लाग्छ कि मानिसहरूलाई यो जान्न महत्वपूर्ण छ कि यदि तपाई आइट्युन्स म्याच प्रयोग गर्नुहुन्छ भने यस प्रविधि प्रयोग गर्दा त्यहाँ केही समस्याहरू छन् किनकि एक पटक तपाईले आफ्नो स्पानिश खाताबाट उत्तर अमेरिकी प्रवेश गर्नका लागि लग आउट गर्नु भयो भने तपाईले फेरि लगइन गर्न सक्नुहुन्न। Spanish ० दिनमा स्पेनिश AppleID। त्यसैले धेरै सावधान!
इमेजनरलाई जवाफ दिनुहोस्
मसँग आइट्यून्स खेल छ र मसँग त्यो समस्या छैन।
साच्चै हो? (कुनै पनि कुराले मलाई खुशी पार्दैन)। एप्पल को समर्थन समुदायहरु मानिसहरु बाट गुनासाहरु को पूर्ण छन् जो एक खाता र अर्को बिच स्विच गर्दा खाता ब्लक गरिएको छ कि iTunes मिलान सक्रिय थियो। सबै ठाउँमा सयौं प्रविष्टिहरू छन्। यति धेरै कि म यसलाई मेरो सामान्य खातामा यसलाई ब्लक नगरी छोड्ने डरको लागि सक्रिय गर्न चाहन्न।
र यति सुरक्षित। मैले प्रकाशित गरेको लेख मेरो आफ्नै नयाँ अमेरिकी खाताको साथ रहेको छ, मैले ट्यूटोरियल गर्न खाताहरू परिवर्तन गरेको छु मलाई कति पटक थाहा छैन, र मसँग आइट्यून्स म्याच छ। यो होइन कि तपाईको कुराले समस्या हुन्छ, तर मेरो केस फरक हुनुपर्छ किनकि यो मेरो लागि राम्रो हो र मैले खातामा समस्या बिना नै परिवर्तन गरें।
यस (भर्खरको) TUAW लेखको बिन्दु2हेर्नुहोस्:
M Λ Я IO TT E भन्यो
M Я O IO TT E मा जवाफ दिनुहोस्
धन्यबाद, हामी यसलाई सच्याउने प्रयास गर्नेछौं।
Conchita रजाई भन्यो
धन्यबाद जानकारी को लागी, यो धेरै उपयोगी छ। मँ केही अडियो पुस्तकहरू किन्न चाहन्थें जुन स्पेनमा यहाँ अधिकार सम्बन्धी समस्याहरू छन् जस्तो देखिन्थ्यो। म तिनीहरूलाई सामान्य रूपमा अडिवल.कट वा किन्डल व्यक्तिहरूबाट खरिद गर्दछु किनभने म केवल अंग्रेजीमा पढ्छु र सुन्छु, तर कहिलेकाहिँ अधिकारका सवालहरू छन्। मैले आईट्यून्समा समस्या भएको अडियो पुस्तकहरू फेला पारे तर निश्चित रूपमा मैले उनीहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्छ। तपाइँ कसरी सुझाव दिनुहुन्छ कि म भुक्तानी पूरा गर्छु? धेरै धेरै धन्यवाद र बधाई छ, कोन्ची
Conchita रजाईलाई जवाफ दिनुहोस्
भुक्तानी गर्नु एकदम जटिल छ, किनकि यसको लागि संयुक्त राज्य अमेरिका कार्ड चाहिन्छ। सब भन्दा सजिलो कुरा भनेको eBay मा अमेरिकी आईट्यून्स कार्ड किन्नु हो, तिनीहरूलाई भेट्टाउन गाह्रो छैन।
नमस्ते लुइस। ल। जानकारी को लागी धेरै धन्यबाद। म भाग्यमानी छु कि हेरौं। 😉
नमस्ते, मसँग एउटा प्रश्न छ!
मसँग मेरो पहिलो एप्पल उत्पाद (आईप्याड) हुनेछ र म यसभन्दा पहिले कुनै पनि आईट्युन्स / स्याउमा दर्ता भएको छैन, मेरो प्रश्न यो हो कि यदि मैले संयुक्त राज्यबाट मेरो एप्पल आईडी बनाउनु पर्छ भने? म मेक्सिकोबाट हो तर यदि म संयुक्त राज्यबाट मात्र दर्ता गर्छु भने मलाई कुनै समस्या हुने छैन? म मेक्सिकोबाट आईडी लिन चाहन्न किनकि म अमेरिकी एप्पल स्टोरबाट सबै कुरा रुचाउँछु र म बोर्डरमा बस्छु भन्ने तथ्यको फाइदा उठाउँदै मलाई यूएस प्रीपेड आईट्यून्स कार्ड किन्न कुनै समस्या हुनेछैन।
के मैले त्यो गर्नुपर्छ? किनकी म यति सुस्त र विचलित छु कि दुई एप्पल आईडी प्रयोग गरेर मलाई तनाव उत्पन्न भयो? हाहााहा ..
म कुनै समस्या बिना अमेजन कार्ड कमाउन अनुप्रयोगहरू सक्षम गर्न चाहन्छु - जुन म चाहन्छु! … धन्यवाद!
सबेलालाई जवाफ दिनुहोस्
मेरो लागि, सजिलो कुरा भनेको आईट्यून्स- GiftCards.com बाट किन्नु हो
बीचमा वा पोखरीमा तपाईंको आईफोन सुरक्षित गर्न पाँचवटा घटनाहरूको विश्लेषण
कसरी पत्ता लगाउने यदि आईएमइ IMEI द्वारा लक गरिएको छ